Hafatry ny komity foibe FFKM: «Aoka tsy hifampihantsy ireo kandidà roa ary handala ny 4F» | NewsMada
Hafatry ny komity foibe FFKM: «Aoka tsy hifampihantsy ireo kandidà roa ary handala ny 4F»
Nifarana, omaly, ny « Komity foibe faha-41 » eo anivon’ny FFKM, notanterahina tany Tsiroanomandidy. Nivoitra tamin’ny hafatra ny momba ny fiainam-pirenena, indrindra ny fiatrehana ny fifidianana. « Miandry ny voka-pifidianana ofisialy ny vahoaka malagasy amin’izao fotoana izao ka mila fitoniana. Miantso anareo kandidà roa izahay tsy hanao fihantsiana fa hiaina sy handala ny Fibebahana, ny fieken-keloka, ny fivahanana ary ny fahamarinana (4F) ». Aoka hijoro sy hitandro hatrany ny fahamarinana », hoy izy ireo. Niantso fifanomezan-tanana ny rehetra koa ny FFKM ho any amin’ny fampandrosoana. Toherin’ny fiangonana efa-tonta ny fitsaram-bahoaka mbola mahazo laka amin’izao fotoana izao. Eo koa ny hiarovana ny harem-pirenena sy ny hirosoana amin’ny fiadanana.
Fanambadian’ny mitovy fananahana
Ankoatra izany, niompana amin’ny firaisam-pinoana na ny ekiomenisma sy ny fiainam-pirenena ny vela-kevitra. Anisan’ny fanapahan-kevitra nisongadina ny tokony hiainana izany fampiraisam-pinoana izany. Eo koa ny fandrarana ny fanambadian’ny mitovy fananahana: ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy. Hatsangana eto Antananarivo ny foibe FFKM ary hajoro hatreny ifotony ity rafitra iraisan’ny fiangonana efa-tonta ity. Hamoaka gazety koa ny FFKM.
Hotanterahina any Mananjary ny fihaonamben’ny FFKM amin’ny taona ho avy. Ho filoha hitantana ity rafitra ity indray ny eo anivon’ny FJKM amin’ny taona 2019.
Notanterahina tao amin’ny FLM Tsiroanomandidy ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana namaranana izao “Komity foibe faha-41” izao. Tany an-toerana avokoa ireo filoha efatra mirahalahy mitantana ny FFKM.
Nitobaka ny volabe… Manjaka ny fitiavan-tena
Tsiahivina fa niantso ny hanajana ny safidim-bahoaka sy nanafatra ny ho filoha vaovao ny fanambaran’ny Fivondronamben’ny eveka (Fem), ny faran’ny herinandro teo. Nanitrikitrika koa anefa izy ireo fa nitobaka ny volabe. “Mampanontany tena ny mahita ireo volabe naparitaka… Manjaka ny fitiavan-tena. Mahazo vahana ny fitiavam-bola. Lian-dra ny olona. Maty ny marina ary potika ny soatoavina…”, hoy izy ireo.
Tokony hampieritreritra ny rehetra ireo fanambarana roa avy amin’ny fiangonana ireo.